Ukulethwa kwamazwe aphesheya kwe-HGH kusuka ekhemisi ye-inthanethi ye-HGH eBangkok - HGH Bangkok
Ukulethwa kwamazwe aphesheya kwe-HGH kusuka ekhemisi ye-inthanethi ye-HGH eBangkok
Ikhemisi lethu eliku-inthanethi le-HGH eBangkok linikela ngokulethwa kwamanye amazwe kuwo wonke amazwe omhlaba ngokusebenzisa insizakalo yeposi ye-UPS premium, kuthatha izinsuku ezingama-2-3. Siqinisekisa ukulethwa e-Australia, e-USA, eCanada, e-United Kingdom, e-Russia, e-Europe, e-Asia nakwamanye amazwe. Ku
amazwe aseMiddle East afaka, iSaudi Arabia, United Arab Emirates.
Sikunikeza kanjani ukulethwa?
Ngemuva kokuthi iklayenti liqede futhi likhokhe i-oda lakhe kuwebhusayithi yethu (isib Ukudlisa imali ngebhange) Silungiselela ukuthi i-hormone yokukhula ithunyelwe ezweni lakhe, ama-hormone okukhula afakwa emaphaketheni akhethekile ukuze kulondolozwe amakhaza ngaphakathi, okuqinisekisa izimo ezinhle zokugcina phakathi nayo yonke inqubo yokuhambisa. Ngemuva kwalokho sibiza i-UPS service service, i-courier ilungisa amadokhumenti adingekayo ngenombolo yokulandela umkhondo.
I-oda lakho, isibonelo V022 6083 XXX.
Ngaphambi kokuthumela i-oda lakho kwinsizakalo yokulethwa, sibuyekeza isikhathi esithunyelwe sisuka ku-UPS. Ngakho-ke kuzonciphisa isikhathi sokugcina se-oda lakho lamaphasela esitokweni okuncane ngangokunokwenzeka. Isibonelo iphasela elitholwe yi-UPS ngoMgqibelo ekuseni, lizohamba ngoMgqibelo ebusuku bese iklayenti liyithola endlini ngendlu uqobo ngoMsombuluko.
ngemuva kokuba sithumele iphasela, inombolo yokulandelela ye-oda lakho sizothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili.
Uzothola imininingwane yokuthumela ngenombolo yokulandela ngomkhondo i-V022 6083 XXX nganoma yisiphi isikhathi ungabheka indawo ebuyekeziwe nendlela yephasela lakho online. Lokhu kungenziwa kuwebhusayithi esemthethweni.
gcwalisa inombolo yakho yokulandela futhi uthole imininingwane ephathelene nephasela nganoma yisiphi isikhathi.
Singazithola izinkinga ezinkambisweni noma ekuthumbeni?
Amakhasimende amaningi phambilini ayeyalele ukuthi kukhule ama-hormone kwamanye amawebhusayithi futhi awazange athokoze ngalokho. Amanye amaphasela ayethathwa nje emasikweni futhi awakaze azithole izimpahla zawo. Isitolo sethu siqinisekisa ukulethwa emnyango we-custome, sinesipiliyoni sokuletha i-HGH ukukhula kwehomoni ngaphezulu kweminyaka ye-5 kuwo wonke amazwe omhlaba.
Siyazi ngemininingwane yokuvunyelwa kwesiko emazweni amaningi. Uma kunesidingo, singeza idokhumenti elihambisana nayo neRisidi kuphasela.
Ngaphezu kwepeni lokufaka i-thermo kuhlelwa kusengaphambili ngepensela elikhethekile eliqinisekisa ukuphepha kokuvunyelwa kwamasiko nokuvimbela ukuthathwa.
Yonke imiyalo ye-HGH ipakisha emaphaketheni akhethekile okubamba ukushisa okungaguquguquki, hhayi ngaphezu kwama-12-16 degrees.
Ngokwezivivinyo zaselebhu, ayithinti ikhwalithi yomkhiqizo, enezikhathi ezimfushane zokuhola (isikhathi sokulethwa).
Uhlu lwamazwe abaletha ukukhula kwe-hormone:
Kufakwe ku: Shipping
esihlokweni esilandelayo Ukulethwa kwamazwe ngamazwe kaHGH
UJason Thomson - Juni 25, 2020
Sawubona kuzwakala kahle ukuthi liyini izinga lokushintshanisa ukuze ubambe ongezansi uyathemba ukuthi uzoxhumana kungekudala uJason
uJan - Novemba 9, 2019
sinolwazi futhi imininingwane yokulethwa eJalimane, siqinisekisa ukulethwa okuphephile
noma sizobuyisela imali yakho ku-akhawunti yakho yasebhange
Klaus - Novemba 9, 2019
Sawubona, ngivela eJalimane
Ungaqinisekisa ukulethwa okuphephile eJalimane?